Ka hor suuqa kala iibsiga xiddigaha ee bisha Janaayo miyey Kooxda Manchester United heshay wax dalab ah oo ku aaddan Paul Pogba? – Gool FM
Ka hor suuqa kala iibsiga xiddigaha ee bisha Janaayo miyey Kooxda Manchester United heshay wax dalab ah oo ku aaddan Paul Pogba?
Haaruun December 20, 2021
(Manchester) 20 Dis 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa lagu soo warramayaa in aysan helin wax dalab ah oo ku aaddan xiddigeeda khadka dhexe ee Paul Pogba ka hor suuqa kala iibsiga ee bisha Janaayo.
28-sano jirkaan ayaa kaliya lix bilood uga harsan tahay qandaraaskiisa uu ku joogo garoonka Old Trafford, mana jiraan calaamado muujinaya inuu ka xaajoon doono heshiis kordhin cusub.
Sida laga soo xigtay Majaladda Manchester Evening News, Tababaraha ku meel gaarka ah ee Kooxda, Ralf Rangnick ayaa diyaar u ah inuu u ogolaado Pogba inuu ka tago kooxda suuqa jiilaalka, si kastaba ha ahaatee Red Devils ayaan weli helin wax dalab ah oo ku aaddan xiddiga reer France.
Warka ayaa intaa ku daraya in Man United ay awoodi wayday in ay la soo saxiixato xiddig cusub oo khadka dhexe ah xagaagii hore, iyagoo go’aansaday in ay mudnaanta siiyaan saxiixyada Jadon Sancho, Raphael Varane iyo Cristiano Ronaldo oo ku qarash gareeyay in ka badan 100 milyan oo gini.
Man United ayaa xiiseyneysay labada ciyaaryahan ee midka ka tirsan West Ham United ee Declan Rice iyo xiddigaha Naadiga Rennes ee Eduardo Camavinga oo hadda ku sugan Real Madrid, inkastoo heshiiska labada ciyaaryahan ay ku guuldarreysatay.
Jesse Lingard iyo Juan Mata ayaa sidoo kale qandaraaskoodu dhacayaan xagaaga soo socda, Tababare Rangnick wuxuu hadda rajeynayaa inuu soo qaato ciyaaryahan cusub oo khadka dhexe ah sanadka cusub.
Pogba oo horay loola xiriirinayay kooxaha Real Madrid iyo Paris Saint-Germain ayaan wax kulan ah u ciyaarin Man United tan iyo kulankii ay guuldarrada 5-0 ah kala kulmeen Liverpool bishii October kaddib dhaawac muruqa ah oo soo gaaray.
“Qofkii dhaleeceeya Messi waxba kama fahamsana kubadda cagta” – Agaasimaha ciyaaraha ee PSG